nanaovan’i Madagasikara fifanekena ny amin’ny handraisany anjara amin’ny ady atao amin’izany. Maro ny voka-dratsy ateraky ny fahasimban’ny sosona ôzôna, araka ny fanazavan-dRalalaharisoa, tale jeneraly iray eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, omaly. Anisan’ireny ny aretin’ny homamiadan’ny hoditra, vokatry ny fivantanan’ny taratra “ultra violet” avy hatrany amin’ny tenantsika. Eo ihany koa ny fahajambana. Mba hahafahana miaro amin’ireto voka-dratsy roa ireto tsy hitranga amintsika olombelona sy ny zava-manan’aina hafa ary dia nanome fiofanana ireo mpanamboatra vata fampangatsiahana sy ireo mpanara-maso ny entana miditra eto amintsika, izay mety hanimba ny sosona ôzôna ity minisitera iray ity. Etsy amin’ny Motel Anosy no hanatanterahana izany, hifarana anio.